3, 4, 5 AXIS Dental Milling Machine-News-VSmile Co., ltd
3, 4, 5 AXIS Dental Milling Machine
Oge: 2021-05-31 ikwu:13
Na dentistry dijitalụ, data ihe owuwu nke emepụtara na ngwanrọ CAD na-agbanwe n'ime igwe maka imepụta CAM ma mechaa tinye ya na igwe igwe, anyị na-ahụkarị ngwaọrụ nhazi site na ọnụọgụ nke igwe axis:
a) 3-axis igwe ngwaọrụ
Typedị igwe a na-egwe ihe nwere ọ̀tụ̀tụ̀ nke mmegharị n'ọnọdụ atọ gbasara ohere. Yabụ, ụzọ ụzọ igwe ihe na-akọwapụta ụkpụrụ X -, Y -, na Z-iche. The ngụkọta oge ulo oru mbo bụ ntakiri. Ngwuputa nke subsections, axis divergences na convergences, agbanyeghị, agaghị ekwe omume. Nke a choro ka egbochie igbochi ya. Ngwaọrụ axis niile nke eji na eze nwere ike gbanwee 3 Celsius na nhazi nke ime na n'èzí. Uru nke igwe ndị a na-egwe ọka dị mkpụmkpụ oge na njikwa dị mfe site na anyụike atọ. N’ihi ya, ụdị igwe ihe na-egwe ihe na-adịkarị ọnụ ala karịa ndị nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu of anyu-ike.
Ihe Nlereanya nke 3-axis ngwaọrụ: inLab (Sirona), Lava (3M ESPE), Cercon ụbụrụ (DeguDent).
b) 4-axis igwe ngwaọrụ
Na mgbakwunye na anyụike atọ gbasara ohere, a ga-enwe ike ịgbanwee eriri esemokwu maka akụrụngwa na-enweghị atụ. N'ihi ya, ọ ga-ekwe omume ịhazigharị ihe owuwu mmiri na nnukwu nnweta nke dị elu na-ebuwanye akụkụ akụkụ ya ma si otú a chekwaa ihe na oge egwe ọka.
Ihe Nlereanya: Zeno (Wieland-Imes).
c) 5-axis igwe igwe
Site na ngwaọrụ igwe ihe 5-axis enwere, na mgbakwunye na akụkụ atọ gbasara mbara igwe na akwa akwa na-agbagharị agbagharị (nke anọ), ohere nke ịgbagharị igwe na-egweri (axis nke ise). Nke a na-enyere egwe ọka nke geometries dị mgbagwoju anya na obere akụkụ, dịka ọmụmaatụ, FPDs dị ala na-agbakọta ezé ezé (njedebe njedebe na-atụgharị ihu na mbara igwe), ma ọ bụ okpueze na FPD substructures na, n'ihi nsonaazụ anatomically belata, gosipụtara njikọta mpaghara na mputa eku.
Ọ dịkarịa ala, a chọrọ axis igwe 4 maka igwe igwe iji mepụta ihe maka ọnọdụ a.
Agbanyeghị, ịkpụzi ahịrị 5 na-ewu ewu karị n'ihi na ọ na-enye nhọrọ maka ịhazi otu usoro (belata oge mbubata), na-enye ohere ịnweta ohere jiometrị, ma melite ndụ ngwa ọrụ yana arụmọrụ nke usoro ahụ site na ịgbado okpokoro maka ezigbo ọnwụ ọnọdụ.
So nke ụdị machining ị kwesịrị ị họrọ maka oru ngo gị. Ihe niile na-agbadata maka ihe ndị ịchọrọ pụrụ iche, mmefu ego na usoro iheomume. Maka ndụmọdụ ọkachamara, soro otu n'ime ndị ọkachamara ọkachamara ọkachamara anyị na-ekwurịta okwu ịchọta ezigbo egwuregwu maka mkpa gị.
PREV: Igwe Zirconia Diski
OSOTE : Họrọ Zirconia
Vsmile Titanium oghere
Vsmile HappyZir ST Pre-Shaded Zirconia Block Dakọtara na Amann Girrbach Cam Sistem